सबैंको सल्लाहमा अघि बढेको हुँ, नेतृत्व छान्दा प्रजातान्त्रिक विधि अपनाइयो भने पनि त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैंन : आचार्य - Vishwa News
सबैंको सल्लाहमा अघि बढेको हुँ, नेतृत्व छान्दा प्रजातान्त्रिक विधि अपनाइयो भने पनि त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैंन : आचार्य
गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ९ औं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आउँदो अक्टुबर १५ देखि १७ सम्म काठमाण्डौंमा हुदैंछ । संघको नया नेतृत्व समेत चुन्ने त्यो सम्मेलन हुनु केही महिना अघि अहिलेदेखिनैं चुनावी चर्चा पनि बाक्लिन थालेको छ । आसन्न सम्मेलनमा हालका उपाध्यक्ष समेत रहेको कुल आचार्य पनि अध्यक्षमा उठ्ने चर्चा छ । उनैं आचार्यसग उनी अमेरिका भ्रमणमा आएको समयमा विश्व सन्देश र यसको अनलाइन पोर्टल विश्व न्यूजका लागि सुरज भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
चुनावी अभियान सुरु भैसकेको हो ?
चुनावी अभियान भन्दा पनि यसलाई अहिले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको अधिवेशनहरु भैरहेको छ त्यसमा सहभागी भएको हिसावले मैले लिएको छु । अहिलेको पदीय हिसावले पनि राष्ट्रिय अधिवेशनहरुमा पुग्नु स्वभाविक हो । राष्ट्रिय अधिवेशनहरु भव्य र सभ्य ढंगवाट सम्पन्न गराउनु हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो । त्यही अनुरुप विभिन्न राष्ट्रिय अधिवेशनहरुमा हामी आइसिसीमा रहेका पदाधिकारीहरु सहभागि भैरहेका छौं । यसरी अधिवेशनहरुमा सहभागि हुने क्रममा साथी भाई हरु सँग भेटघाट हुदा अलि अलि चुनावी कुरा हुनु स्वभाविक नै हो । संस्थामा अगाडि बढिरहदा आकांक्षी बन्नुलाई सहज रुपमा लिनुपर्दछ भन्ने लाग्छ ।
एनआरएनएमा तपाईको संलग्नताबारे केही बताइदिनुहोस् न ?
म एनआरएनए बेलायतको स्थापनादेखिनैं सक्रिय छु । त्यहाको संस्थापक सदस्य हुदैं २००५ देखि सदस्य उपाध्यक्ष हुदैं अध्यक्ष, त्यहावाट आइसिसी सदस्य, युरोप संयोजक र अहिले आइसीसीको उपाध्यक्षको भूमिका रहेको छु । आइसिसीमा मात्रैं पनि मैले काम गरेको १२ वर्ष पुगिसकेको छु । यो विचमा पदीय भूमिकासँगैं आवश्यकता अनुसार विभिन्न टास्क फोर्सहरुमा बसेर तथा नेतृत्व गरेर काम गरेको छु । अझ खासगरी एनआरएनए आइसिसीका विभिन्न च्यारिटीका योजनाहरुमा मैले धेरैं कामहरु गरेको छु । म यस संस्थामा लागेदेखिनैं सक्रिय रहँदैं आएको छु ।
अहिले तपाई नेतृत्वमा उठ्ने चर्चा छ, पछाडि फर्कने संभावना चाहि के छ ?
मैले अगाडि बढ्ने इच्छा जाहेर गरिसकेको छु । मैले यो इच्छा पछाडि हट्नका लागि जाहेर गरेको होइन । सबैं साथीहरुको सर सल्लाहमानैं म अगाडि बढेको हु । मैले यो संस्थामा गरेको योगदान र मेरो सक्रियता देखेरनैं साथीहरुले अगाडि बढ्दा हुन्छ भनेर नैं म अगाडि बढेको हु । म पछाडि हट्ने हुदैंन । अर्को कुरा म कुनैं सम्झौताका लागि उम्मेद्वारी दिने कुरा गरिरहेको छैन । म अगाडि बढेको छु, आवश्यक परे प्रतिष्पर्धा हुदा पनि अगाडि बढ्ने गरी मेरो तयारी हो । यसलाई कसैले पनि अन्यथा बुझ्ने र लिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तपाई अघि बढिरहदा जित्ने आधार चाहि के हो नी ?
मैले अघि पनि भने यो मेरो सक्रियता र एनआरएनए अभियानप्रतिको मेरो लगाव नैं मेरो अगाडि बढ्नुको कारण हो । मलाई चिन्नुभएका एनआरएन साथीहरुले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, यसले संस्थालाई गरेको छ भनेर उहाहरु जनकार नैं हुनुहुन्छ त्यसैले उहाहरुको विश्वास नैं मेरो जितको आधार पनि हो । जहावाट एनआरएनको सुरुवात भएको थियो, त्यो देशवाट नैं म काम गर्दै अगाडि आएको हु । आधार तहवाटनैं मैले काम गरेको हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, त्यहावाट सुरु गर्दै अहिले आइसिसीको उपाध्यक्ष हुदा धेरैं कुराहरु सिक्न, बुझ्न र गर्न पाए, त्यो अनुभववाट सिकेर मेरो एनआरएनएलाई कसरी लैजानुपर्दछ भन्ने एउटा छुट्टै भिजन पनि छ । म यसलाई कार्यक्रम भन्दा पनि मेरो चाहनाको रुपमा लिन्छु किनकि एनआरएन भनेको एउटा अभियान हो । यसमा व्यक्तिको एजेण्डा भन्दा पनि सामुहिक निर्णयले बढी अर्थ राख्दछ । संस्थाको योजनाले नैं एनआरएनए मुभमेण्ट अगाडि बढ्न सक्दछ । इसतर्फ मेरो जोड विगतदेखिनैं रहदैं आएको छ र आगामी दिनमा पनि मेरो यसमा नैं जोड रहन्छ । सामुहिक ढंगवाट संस्थालाई अगाडि बढाउने मेरो धेय सधैं रहेको हुन्छ । यसको अर्थ नेतृत्वको निति र भिजन हुनुहुदैंन भन्ने होइन त्यो निति र भिजन मैले पनि लिएको छ, अहिले विभिन्न एनसिसीहरुको अधिवेशनहरुमा सहभागि हुदैं गर्दा केही विषयहरु पनि कलेक्सन गरिरहेको छु । अहिले एनसिसीहरुको अधिवेशन गराउने दौड धुप भैरहेको छ, विस्तारैं एनसिसीका अधिवेशन सकिए पछि यसबारे छलफल गरी मेरा योजनाहरु पनि बाहिर ल्याउनेछु । मैले मुख्यत: यो एनआरएनए संस्थामा बाहिर वस्ने नेपालीको भावना कसरी जोड्न सकिन्छ त्यसतर्फ विशेष जोड दिनेछु ।
उसो भए अहिलेको दौडाई शक्ति संचयको लागि हो त ?
होइन, होइन शक्ति संचय गर्न हिडेको होइन । मेरो शक्ति त अलेरेडी नैं छ नी , यो संस्थामा १२ वर्ष काम गरे, मेरो कामको मुल्याकंनले मेरो शक्ति बारे बोलिहाल्छ भन्ने लाग्दछ । १२ वर्षमा जोडिएका एनआरएन साथी भाईहरुनैं मेरा शक्ति हु । १२ वर्षमा नभएको कुरा अहिले एक डेढ महिनामा कसरी होला त यो केवल साथी भाईसगको भेटघाट हो, एनसिसीहरुको अधिवेशनमा सहभागिता जनाउने कुरा हो । यसमा भाग लिन जादा चुनावको बारेमा कुरा हुनु सरसल्लाह गर्नु समान्य नैं हो भन्ने लाग्छ ।
अन्यले पनि त एनआरएनएमा योगदान गर्नुभएकै छ नि होइन ?
होइन मैले त्यसो पनि भन्न खोजेको होइन, मैले पनि समय धेरैं नैं खर्च गरेको छु हैं यो एनआरएनए अभियानमा भन्न मात्र खोजेको हु । अन्यले गर्नु भएकैं छैन भनेको होइन । र अर्को यो एनआरएनए एउटा संस्था मात्र नभएर अभियान पनि भएकाले यसमा जो जहिले आउनुहुन्छ र केही लगानी गर्नुहुन्छ उहाहरु सबैंको समान अस्तित्व हुन्छ । यसमा लागेर संस्थाको हितमा निस्वार्थ ढंगले काम गर्ने हो, जो विगतमा अग्रजहरुले पनि गर्नुभयो, हामीहरु लागेर पनि यसमा त्यही गर्ने हो आवश्यकता अनुरुपको योजना दिएर संस्थालाई एक्टिभ बनाउने नैं हो, जो मैले पनि नेतृत्वमा आए गर्न सक्छु भनेको हु ।
उसो भए सहमती हुने संभावना छैन ?
होइन सहमतीको लागि त सधैं खुल्ला नैं छौं । हामी (कुमार पन्त र आफू) आत्मिय मित्र हौं । धेरैं कारणले हामी नजिक पनि छौं । मिल्ने कुरामा अब्जेक्सन छैन, र यो सेवा मुखी संस्थामा दिन र सेवा गर्न जाने भएकाले त्यसमा नमिल्नुपर्ने कारण नै छैन । तर चुनाव भयो भने वा प्रजातान्त्रिक पद्दती मार्फत मतदान भएर नतिजा आए मिलिदैंन भन्ने पनि हुदैंन । डेमोक्रेटीक सिस्टमलाई विश्वास गर्ने हामीले यसलाई अन्यथा लिनुहुदैंन । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । प्रजातान्त्रिक विधि जान परे पनि डराउनु वा अर्को अर्थमा त्यसलाई लिनुपर्दछ भन्ने लाग्दैन । तर आफूलाई सही लागे सहमती नत्र आफूलाई गलत लागे असहमती भनेर अड्डी कस्नु पनि राम्रो हुदैंन । बरु जित्नेले हार्नेलाई सगैं लिएर हिड्ने र हार्नेले जित्नेलाई सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता नैं महत्वपूर्ण हो यही अनुरुप अघि बढ्नु पर्दछ ।
भनेपछि तपाई यदि निर्वाचनमा जादा परिणाम अनुकुल आएन भनेपनि सहयोगी भूमिका खेल्नुहुन्छ होइन ?
पक्कैपनि म हारेपनि जितेपनि यो अभियानमा सगैं रहन्छु । म हारे पनि सहयोग गर्छु । यो मैले अहिले मात्र भनेको होइन, अहिलेको कार्यसमितिमा समेत यो विषयलाई मैले उठाउदैं आएको थिए । यसलाई जोडेर मैले कतिपय सन्र्दभमा डिफरेन्ट मत पनि राखेको थिए । हामी जित्नेले दम्भ देखाउने होइन जित्दैमा कसैलाई निषेध गर्ने कुरा राम्रो होइन भन्दैं आएको छु । जितको दम्भ नराखी सबैलाई समेटेर लाने हो । र यो एनआरएनए हामी सबैंको हो हामी कसैले हार्ने वा जित्ने भन्ने हुदैन यसमा त सबैंको समान भूमिका रहन्छ ।
एनआरएनएलाई संस्थागत ढंगवाट अगाडि बढाउनु पर्दछ भनेर तपाईको अभिव्यक्ति कतिपय मिडियामा आएको थियो , के अहिले व्यक्तिगत ढंगवाट यो चलेको छ र ? या तपाई अभिव्यक्ति को प्रति लक्षित हो ?
मेरा अभिव्यक्तिहरु कक्सैप्रति लक्षित होइनन् र मैले त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिएको पनि छैन । मेरो सबैं एनआरएनए अभियन्ताहरु प्रति सम्मान छ । अग्रजहरु प्रति पनि सम्मान छ । मैले बोलेको विषयलाई बग्याएर दिदा कसैलाई फाइदा पुग्छ कि भनेर बंग्याइएको हुन सक्दछ तर मैले एनआरएनए अभियानसग जोडिनुभएको व्यक्तिहरुप्रति लक्षित गरी केही टिकाटिप्पणी गरेको छैन ।
विधानले एनआरएनए गैर राजनितिक संस्था भनेको छ, तर व्यवहारमा त राजनितिक संस्था जस्तो देखिन थालेको छ नि के भन्नुहुन्छ ?
राजनितिको कुरा गर्दा यो एनआरएनए संस्था स्थापनाको हिसावले नैं साझा संस्था हो । देश वाहिर रहेका आम नेपालीको प्रतिनिधिमुलक संस्था हो । इसमा राजनिति गर्ने भन्ने कुरा होइन् अझ मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने त मेरो व्यवहार र मेरो कार्यले पनि मैले यस्तो गर्दिन भन्ने कुरा देखाउछ । म एनआरएनए बेलायतको कार्यसमिति सदस्य देखि अहिलेसम्मको मेरो भूमिकालाई नजिकलाई हेर्नुभएका सबैले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि म राजनितिक दृष्टिले केही पनि हेर्दिन । तर यहा अर्को प्रश्न के पनि छ भने आफूलाई अनुकुल हुदा राजनिति छिराइहाल्ने र आफूलाई फाइदा हुदा त्यो चाहि राजनिति नदेख्ने र अरुलाई फाइदा वा आफ्नो प्रतिकुल भए राजनिति गऱ्यो भनेर चिच्याइहाल्ने प्रवृत्ति जुन छ यसले एनआरएनए संस्थालाई घाटा पुऱ्याइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्दछ, राजनितिक विचार व्यक्तिले बोक्दछ संस्थाले होइन यतिमात्र बुझ्दा पनि धेरै विषयहरु सम्वोधन हुन सक्दछन् ।
मेरो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले यो संस्थाको हितका लागि गरेको योगदान हेरेर सहयोग गर्नुहोस् मैले गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने सहयोग गर्नुहोस् नत्र नगर्दा पनि हुन्छ । मैले हामी एनआरएनहरुको दु:खको साथी जसरी एनआरएनए बन्नुपर्दछ त्यसमा नैं मेरो जोड रहदैं आएको छ ।
चुनावमा त समुहनैं बन्छ होला सन्तुलन कसरी मिलाउने सोच्नुभएको छ ?
आधिकारिक समुहनैं बनाउने भन्ने भन्दा पनि आफूलाई बुझेका र मन मिल्ने साथीहरु मिलेर जाने भन्ने हुन्छ । यसबारेमा कुराकानी पनि भैरहेको छ । अव विस्तारैं साथीहरुको इच्छा बुझेर त्यतातर्फ लागिन्छ । र एनआरएनए ठूलो र संजालको हिसावले समेत फैलिदैं गएकाले वर्ग, क्षेत्र, जात, जाती, लिंग, लगायत सबैंलाई समेटेर साझा रुपवाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा मेरो जोड छ ।
सबैंलाई समेट्ने कुरा गर्दा, हाम्रो उपस्थिति भएन भन्दैं अमेरिकामा रहेका एनआरएनहरुको धेरैं गुनासो सुनिन्छ के यस्मा के भन्नुहुन्छ ?
अमेरिकाको हकमा कुरा गर्दा पक्कैपनि धेरैं पोटेन्सियल भएको एनसिसी मध्ये अमेरिका पर्दछ । यहा बस्ने नेपाली बौद्धिक, आर्थिक हरेक हिसावले सक्षम हुनुहुन्छ । तर पनि अमेरिकावाट खासगरी अन्तराष्ट्रिय कार्यकारी कमिटिमा उपस्थिति हुन सकिरहेको छैन । अमेरिकावाट रतन झा महासचिव हुनुभएको थियो त्यसपछि धेरैं नैं ग्याप भएको छ । यसमा मुख्यत अमेरिकाकैं साथीहरुको दोष देख्छु म, कम्तिमा तपाईहरु जो उठ्न खोजिरहनुभएको छ यहीकैं साथीहरु एउटै पदमा नउठ्नुहोस् , एउटैं पदमा धेरैंले दावी नगरौं, कमसेकम अहिलेसम्म हाम्रो वेलायतवाट एउटै पदमा एक भन्दा बढी उठेको इतिहास छैन , यो कुरा अमेरिकामा पनि हुदा यसले सजिलो गराउछ । सबैं मिलेर जादा पालो सबैंको आउछ । सबैं सल्लाह गरेर एक भएर आउदा नतिजा राम्रैं आउछ त्यसतर्फ सोच्न म सबैंमा आग्रह पनि गर्दछु ।
एनआरएनएले उद्दश्य अनुरुप काम गरेन, चर्चा मात्रैं बढी गऱ्यो पनि भन्छन् नि ?
होइन हामीले नगरेको होइन, विगतका कार्यसमिति र अग्रजहरुले पनि नगर्नुभएको भन्ने होइन । सबैंवाट भएर नैं आज एनआरएनए संस्था रिकगनाइज हुन सकेको छ । यो संस्थाले भूमिका पाइरहेको छ । हो बरु हामीले गरेको काम बारे जानकारी गराउन सकेनौं होला, प्रचार प्रसारमा अलि चुक्यौं होला । हामीले सकेको गरेका छौं, पुराना योजनाहरु सम्पन्न गर्दै नया कामहरुको पनि थालनी गरेका छौं ।
नेपाल सरकारसँग एनआरएनएको समन्वयलाई कसरी हेर्नुभएको छ, सरकारको सहयोग कत्तिको रहेको पाउनुभएको छ ?
नेपाल सरकारले हामीलाई सहयोग गर्दै आएको छ । विगतका सरकार हुन् या अहिलेको सरकारले हाम्रा कुराहरु सुनिरहेको छ । नेपाल सरकारको सहयोग विना त हामीले नितिगत कुराहरु गर्न सक्ने अवस्था थिएन । यतिमात्र होइन नेपालसग जोडिएर हामीले बनाएर योजनाहरुमा समेत नेपाल सरकारको सहयोग रहदैं आएको छ । अहिले संविधानले नैं दोहोरो नागरिकता सुनिश्चित गरिदिएको छ, त्यसलाई कानुनत: सरल र सुलभ कसरी बनाउने भन्ने तर्फ छलफल भैरहेको छ, त्यससग नजिक रहेर काम गरिरहेकाले पनि म के भन्न सक्छु भने हाम्रा कुराहरु सुनुवाई भैरहेको छ, राज्य व्यवस्थामा अहिले छलफल चलिरहेको छ, कतिपय अव्यवहारिक बुदाहरु हटाउन र केही सरल भाषामा बुझ्न सकिने खालका बुदाहरु समावेश गर्नका लागि छलफल हरु भैरहेको छ । नागरिकता पछि पासपोर्टको कुरामा छलफल अगाडि बढाउने सोंच रहेको छ । त्यस पछि नेपालमा सम्पक्ति किन्न र त्यहाको बैंकमा नगद राख्न, लगानी गर्न र आवश्यक परेको खण्डमा कर्म देशमा ल्याउन विद्यमान कानुनी झन्झटलाई सहज तुल्याउनको लागि पहल गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्दा विदेशमा हुर्किरहेको पुस्ता पनि नेपालसग जोडिन सजिलो हुन्छ । त्यसतर्फ पनि नेपाल सरकार सकारात्मक हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
एनआरएनए संस्थालाई रिकनाइज गर्ने कुरामा नेपाल सरकारले ठूलो सहयोग गरेको छ । एनआरएनएले उठाएका मागका सम्बोधन गर्ने देखि लिएर समन्वय गरी विभिन्न कामहरु भैरहेका छन् । लगानी सम्मेलनमा एनआरएनएलाई दिएको भूमिकाले पनि त्यो दस्र्याउछ । राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री एनआरएनएको कार्यक्रममा आउनु, कतिपय कार्यक्रममा सहकार्य गर्नुले पनि नेपाल सरकारले हामीलाई सकारात्मक रुपमा हेरेको छ भन्ने हामी बुझ्नुपर्दछ । कही कतैं विषयहरुमा मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ भए छलफल गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ । हामी नेपालको विकास र समृद्दिको यात्राका सहयोगी बन्न चाहन्छौं । नेपाल सरकारको चाहना पुरा गर्न सहयोग गर्न चाहन्छौं यसलाई सरकारले पनि बुझेको छ भन्ने लाग्छ ।
हामीले समाजलाई मिलाएर लैजानुपर्दछ । हाम्रो मात्र हामी पछिका पुस्तालाई पनि एनआरएनए के हो किन चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझाउदैं नेपालसग कनेक्ट गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसतर्फ सोच्दैं देश वाहिर रहेका सबैं नेपालीको आस्था र विश्वासको संस्था एनआरएनएलाई अझ संस्थागत र सुदृढ बनाउन तर्फ सबैं लागौं यति भन्न चाहन्छु । एनआरएन हाम्रो, सवै मिलेर बनाऊ राम्रो, धन्यवाद ।
जापानमा नेपालीलाई केयर गिभरको अवसर, कात्तिकमा परीक्षा